Mr. Shi, aasaasihii Hongjun, waxa uu ka qalin jabiyay Jaamacadda Sichuan, takhasuskiisuna waxa uu ahaa naqshadaynta farsamada iyo farsamaynta iyo farsamaynta.Mudadii uu jaamacada ku jiray Mr. Shi waxa uu bartay dhawr koorasyo ​​kala duwan kuwaas oo la xidhiidha machanic designe iyo automation-ka korontada oo runtii ah mid lama huraan ah aadna ugu anfacaya shaqadiisa mustaqbalka gaar ahaan marka uu galo warshada Automation-ka!
Ka dib markii uu ka qalin jabiyay Jaamacadda Sichuan, Mr. Shi wuxuu galay Sany Group oo ah shirkadda NO.1 ee soo saarta mashiinnada culus, Mr. Shi wuxuu ciyaaray maamulaha aqoon isweydaarsiga alxanka!
Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimada Sany, Mr. Shi wuxuu leeyahay fursado badan oo uu ku ogaanayo wax badan oo ku saabsan qalabkan wax soo saarka ee cnc ee si toos ah sida CNC lathes, mishiinnada wax-shiidka CNC, xarumaha CNC machining, CNC silig EDM mishiinka mashiinka, qalabka mashiinka CNC EDM, mashiinada goynta laser iyo alxanka tooska ah ee robots ect.
Isla markaana, Mudane Shi waxa aad ugu adkeyd in uu qalabka dayactirka ku helo xawaare lagama maarmaan ah iyo kharash la aqbali karo!Iibsashada qalabka is-difaaca ah aad bay u adkayd, qiimuhuna aad buu u sarreeyay, gaar ahaan marka aad doonayso inaad iibsato dhawr nooc oo ka kooban qaybo si wadajir ah loogu hagaajiyo qalabka otomaatiga ah!Xaaladahan ayaa dhibaato weyn ku ah wax-soo-saarka aqoon-is-weydaarsiga, gaar ahaan marka qalabku xumaado, balse aan la hagaajin karin waqtigii loogu talagalay, taasoo khasaare weyn ku keeni doonta warshadda!
Sichuan Hongjun Science and Technology Co., Ltd. la aasaasay!
Hongjun waxay ku bilaabataa ganacsigeeda 3 qof oo keliya iyo xafiis yar!
Bilawga ganacsigeeda, Hongjun waxay inta badan diiradda saartaa alaabta meeraha gearbox, Hongjun meeraha gearboxes waxay leeyihiin faa'iidooyin badan sida saxsanaan sare, qiimo wanaagsan iyo awood sare oo lagu match oo leh noocyada caanka ah ee servo sida Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, Teco, Siemens ... iyo Hongjun meeraha gearboxes waxay la jaanqaadi karaan sumadda caanka ah ee Neugart sidaa darteed macaamiisha intooda badani waxay yimaadaan Hongjun gearbox sababtoo ah waxay si toos ah ugu jeesan karaan sanduuqa gear-ka iyagoo leh tayo sare leh laakiin qiimo aad u hooseeya!
Hongjun waxay u guurtay xafiiskeeda cusub waxayna ku kordhisay kooxdeeda inay noqdaan 6 qof!
Inta lagu jiro sannadahan, oo ku saleysan sida dhakhsaha leh ee ay ugu korto iibinta sanduuqyada gearboxes-ka, Hongjun waxay balaadhisaa alaabteeda si ay u noqoto matoorada servo, inverters, PLC, HMI, alaabada liner ...
Hongjun waxay wada shaqayn la bilowday Panasonic!
Hongjun wuxuu bilaabay inuu iibiyo Panasonic servo matoorada iyo wadooyinkiisa!Gaar ahaan Panasonic A5 A5II iyo taxanaha A6!
Hongjun waxay bilawday wada shaqaynta ay la leedahay Danfoss ee rogayaasha, Hongjun waxay ku takhasustay bixinta taxane cusub oo danfoss ah sida FC051 FC101 FC102 FC202 FC302 FC306
Isla mar ahaantaana, Hongjun waxa ay isku dayday in ay iskaashi la samaysato beddelayaasha kale ee caanka ah sida ABB Siemens ect.
Dhammaadka sanadkan, iibka sanadlaha ah ee Hongjun wuxuu gaaraa 2 milyan oo doolar!
Hongjun waxay mar kale u guurtay xafiiskeeda cusub oo ka badan 200 mitir oo laba jibbaaran, kooxda Hongjun waxay hadda koreen in ka badan 15 qof!
Waqtigan xaadirka ah ee badeecadaha Hongjun ayaa sidoo kale loo ballaariyay inay noqdaan: servo motor, gearbox planetary, inverters, PLC, HMI, blocks liner, dareemayaasha...
Hongjun waxay balaadhisay badeecooyinkeeda mar kale!Tan iyo 2011 Hongjun bilaabay iskaashiga ee alaabta automation Delta!Hongjun waxay dabooshaa dhammaan alaabada farsamaynta warshadaynta Delta sida taxanaha Delta servo A2 B2, Delta PLC, Delta HMI iyo Delta beddelayaasha!
Qeybtii labaad ee sanadka 2011, Yaskawa waxay sidoo kale bilowday wadashaqeynteeda Hongjun gaar ahaan alaabteeda servo Sigma-5 iyo Sigma-7 !
Hongjun wuxuu bilaabay inuu iibiyo Yaskawa rovers!
Ilaa hadda Hongjun waxay dabooshaa dhammaan noocyada rogrogayaasha caanka ah sida ABB Danfoss Siemens Yakawa iyo qaar kale oo caan ah oo Shiinaha ah!
Hongjun waxa ay samaysay hal nooc oo ah matoor hube ah oo gudaha ku leh codeer kaas oo noqday kan ugu dhaqsaha badan dhanka adeega robot-ka, gaadhiga AGV, qalabka caafimaadka ect.
Summada caanka ah ee Kuuriya ee Samsung iskaashiga waxay la xiriirtay Hongjun waaxda robot-ka waxayna bilawday iskaashi ay la yeelato Hongjun matoorada servo wheel ee baabuurkeeda saadka ah!
Hongjun waxay iibsatay xafiis u gaar ah oo ka badan 200 mitir oo laba jibbaaran waxayna u guurtay goobteeda cusub-JR Fantasia oo ku taal agagaarka Xarunta Sarrifka Badeecadaha ee Shiinaha (CCEC), isla markaana kooxda Hongjun waxay leedahay in ka badan 20 xirfadlayaal ah kuwaas oo hubin kara inay wanaagsan yihiin. adeegga dhammaan macaamiisheena!